मन्त्रीज्यू तलका तस्बीर हेर्नुहोस् - लीलामणी पौडयाल - khabarxpress.com
मन्त्रीज्यू तलका तस्बीर हेर्नुहोस् – लीलामणी पौडयाल
२०७७, २ चैत्र सोमबार १४:४६ मा प्रकाशित ( ३ महिना अघि) ४०६२ पाठक संख्या
वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४०८ हप्ताको सफाइ अभियानमा विभागीय मन्त्री आए । सफाइ अभियानमा मेरो साथ सहयोग रहने छ भनेर बोले सबैले ताली बजाए कार्यक्रम सकियो । अर्को हप्ता फेरी त्यही सफाइ अभियान संचालन भयो । तर विभागीय मन्त्रीले भने जस्तो थिएन पुरै दुर्गन्धित र हेर्नै घीनलाग्ने फोहोरै फोहोरका बीच अभियान भयो ।
यही विषयलाई लिएर प्रमुख अभियन्ता लीलामणी पौडयालले सामाजिक संजालमा लेख्दै कारवाहीको माग गरेका छन् ।
हामी विगत झण्डै आठ वर्षदेखी राष्ट्रब्यापी सरसफाई महाअभियानमा छौं। “सातामा दुई धण्टा राष्ट्रका नाममा” हाम्रो अभियानको धेय हो भने हामी सक्छौ, हामी गर्छौ, हामीले नगरे कस्ले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने हाम्रा मुल नारा हुन्।
गत शनिवार शिवरात्री महापर्व पछिको पशुपति क्षेत्र सरसफाई गर्ने कार्यक्रम पशुपति क्षेत्र विकास कोषले राखेको थियो र हामीले वहाँहरूलाई सघाउने वचन दिएका थियौ। हामी सोही अनुसार उपस्थित भयौ । तर, अनौठो हामी त्यहाँ तोकिएको समयमा पुग्दा एक वोर्ड सदस्य जो आफै बाग्मती अभियन्ता हुनुहुन्छ, एक सहायक कर्मचारी र एउटा एकटन फोहर उठाउन पनि नसक्ने सानो भ्यानमात्र थिए। कोषमा हामीलाई जानकारी दिएअनुसार १०० को हाराहारीमा त सरसफाई कर्मचारीमात्र छन्। उच्चपदाधिकारीको फोन स्वीचअफ थियो।
हामी पुगेको हम्समण्डप क्षेत्र पुरै दुर्गन्धित र हेर्नै घीनलाग्ने थियो। मेला ब्यवस्थापन समितिहरू गठनगरी महिनौ देखी तयारी गरिएको थियो। मेलाभर हजारौं स्वयम सेवक परिचालन गरिएको थियो। हामी पुगेको हंसमण्डप क्षेत्रमा निशुल्क खाना खुवाएर त्यसको फोहर अरसल्ल जताततै फ्याकिएको बुझ्न सकिन्थ्यो। त्यसको ब्यवस्थापन कुनै कठीन काम थिएन। खाना बाड्ने स्वयम सेवकले नै मण्डपको चारैतीर कन्टेनर राखी त्यही फोहर थुपार्न लगाउन कुनै महाभारत थिएन। भोलीपल्ट विहानै कोषको आफ्नै ट्रकमा फोहर उठाउने ब्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। तर, त्यहाँको दुर्दसाले कोष पदाधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारी, कमर्मन्यता र फोहरबाट सर्वसाधारणलाई पर्नसक्ने असर प्रतिको असम्बेदनशीलतामा कारण जो कोहीलाई पनि आक्रोशित बनाउंथ्यो।
अनौठो त वहाँहरूले कार्यक्रम राख्नु भयो, हामी स्वयमसेवक त सपय मै उपस्थित भयौ तर जस्को जिम्मेवारी हो, लाजलाई लाजलाग्ने गरी जस्को अकर्मन्यता प्रदर्शन भैरहेको थियो उनीहरू उपस्थित नभएको मात्र होइन मोवाइल बन्द गरेर बसेका थिएँ। उनीहरू त्यस ठाउमा त्यही कामकालागि तलवभत्ता खाने हुन्। के उनीहरू उत्तरदायी हुनु पर्दैन? हामीले त्यसदिन करीव २० टन फोहर उठायौ ।आउनुहोस् प्रश्न सोधौ तपाइहामी चुप बस्नु भनेको उनीहरूलाई थप गैह्रजिम्मेवार र अनुत्तरदायी भैरहन प्रेरित गर्नु हो।
माननीय युवा मन्त्री भानुभक्त ढकालज्यू तलका फोटो एक मिनट समय लिएर हेर्नुस्, तपाईले जिम्मेवारी दिएकाहरूले के गरिरहेका छन? यो भन्दा अघिल्लो शनिवारमात्र तपाईले पशुपती कै किनारामा उभिएर अभियन्ता सामु सरसफाई अभियानलाई मेरो पुरा सहयोग हुन्छ भनेर बचनबद्धता ब्यक्त गर्नु भएको थियो। तपाईले जिम्मेवारी पुरा नगर्नेलाई उचित कारवाही गरेर आफ्नो सार्वजनिक प्रतिबद्धता पुरा गर्ने साहस देखाउनु हुनेछ भन्ने पुरा विश्वास छ।
पशुपती क्षेत्र परिसरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै अभियन्ताहरु
हाम्रो अभियान जारी छ! जारी छ!! जारी छ!!!